Ụzọ Idozi Kaadị ebe nchekwa Error
Njehie ozi Na kaadị ebe nchekwa
Olee otú naghachi furu efu data site na kaadị ebe nchekwa njehie
Video nkuzi nke kaadị ebe nchekwa njehie
Akpata njehie na ebe nchekwa kaadị
Ụzọ ndị ọzọ obibi na njehie na kaadị ebe nchekwa gị
1 mpe ozi Na kaadị ebe nchekwa
The njehie ozi maka kaadị ebe nchekwa ike ịdị iche iche na ụdị na ikpe nke na-emebi nke mgbagha. Ebe a bụ ụfọdụ n'ozuzu njehie ozi: njehie ke kaadị ebe nchekwa; uninitialized kaadị; kaadị njehie; dee njehie / agụ njehie; a enweghị kaadị ebe nchekwa; kaadị na-apụghị-eji.
Ihe ọ bụla ụdị njehie ke kaadị ebe nchekwa bụrụ na ị hapụ gị kaadị data, ị pụrụ ime ka ha azụ na a na kaadị ebe nchekwa mgbake ngwá ọrụ. Kaadị ebe nchekwa mgbake ngwá ọrụ pụrụ inyere gị aka iṅomi n'ụzọ ezi uche mebiri emebi kaadị ebe nchekwa na mgbe ahụ agbake data.
Ọ bụrụ na ị nwere Mac, i nwere ike iji Wondershare Photo Recovery for Mac (dakọtara na Mavericks), nke na-enyere naghachi formatted, ehichapụ, furu efu na ụfọdụ keerughi stof ka music, videos na foto site na kaadị ebe nchekwa, Mac na ndị ọzọ na media nchekwa ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere Win kọmputa, ị na-enwe ike iji Wondershare Photo Recovery (dakọtara na Windows 8).
Nke a mgbake software aims chọta azụ photos, vidiyo na ọdịyo faịlụ furu efu ruru ka njehie mere na kaadị ebe nchekwa gị. Ọ dị mma ma na-agụ-na-usoro. Ọzọ, ka na-agbalị na Windows version na nzọụkwụ.
2 Olee naghachi furu efu data site na kaadị ebe nchekwa njehie
Nzọụkwụ 1 Jikọọ kaadị ebe nchekwa gị na kọmputa
Fanye kaadị ebe nchekwa gị n'ime kọmputa ma ọ bụ jikọọ na ngwaọrụ ozugbo na kọmputa na iji eriri USB. Mgbe ahụ na-agba ọsọ omume na pịa "Malite" mgbake.
Nzọụkwụ 2 Họrọ kaadị maka Doppler
All draịva ma ọ bụ diski ga achọpụtara site na kọmputa gị ga-egosipụta ebe a, nakwa dị ka kaadị ebe nchekwa gị. Họrọ ya na-amalite na-ike iṅomi ya.
Nzọụkwụ 3 Malite kaadị data mgbake
Mgbe scanning okokụre, niile recoverable data gụnyere audio, video na foto na-depụtara na scanning akụkọ. Preview na ego ndị ị chọrọ na iti na "Naghachi" iji nweta ha azụ.
Mgbe ahụ gị niile na kaadị ebe nchekwa data ọnwụ ruru ka njehie na-azụ. Adịghị azọpụta ha na kaadị na ndabere na ebe dị nchebe.
3 Video nkuzi nke kaadị ebe nchekwa njehie
4 akpata njehie na ebe nchekwa kaadị
The n'elu njehie nwere ike na-abịa owning ka nza nke ihe. Ọ na-àmà si virus ọrịa na-data Ọdịdị ure nke kaadị ebe nchekwa. N'okpuru ebe a bụ ndị kasị nkịtị mere:
»The formatting nke kaadị ebe nchekwa bụghị n'ụzọ kwesịrị
ekwesị.» The faịlụ usoro na-ebibi ma ọ bụ faịlụ usoro si onwunwe bụ Raw
»na-ezighị ezi kaadị
agụ» Malware ma ọ bụ nje ọrịa
»Disk Ọdịdị ure nke kaadị ebe nchekwa
gị» Ike surges
»Iburu si kaadị ebe nchekwa gị na-enweghị mgba ọkụ nke igwefoto
anya» Ịmafe anya igwefoto n'oge usoro nke ide
N'agbanyeghị nke usoro ị na-ahọrọ iji mee n'elu njehie, ihe kasị mkpa ị ga-eme bụ mgbe ịzọpụta ọ bụla ọhụrụ data na ya iji gbochie data overwriting na ga-ekwe ka gị data furu efu ruo mgbe ebighị ebi, ma na-achọta a usoro iji idozi njehie ke kaadị ebe nchekwa ozugbo o kwere omume.
5 ụzọ ndị ọzọ obibi na njehie na kaadị ebe nchekwa gị
Olee otú i nwere mee dị otú ahụ dị iche iche nke njehie? Ugbu a, ị na-enwe ike iji na-eso ọzọ nkuzi awagide nsogbu.
»Kama ị na-elele data na ngwaọrụ gị kpọmkwem, ị nwere ike jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa na ịnweta
data,» ịmụta a kaadị agụ ka ịnweta data on kọmputa gị ma ọ na-agbalị ya ọzọ na data USB.
»Ọ bụrụ na ị na-ahụ na-eji kaadị agụ ada ada na-arụ ọrụ, ị ga mma ka a ego nke kaadị maka njehie. Ọ bụ mee ka ị chọta media njehie site na iji Disk rụkwaa utilities, dị ka Disk rụkwaa Utility na Mac OS X sistemụ arụmọrụ na chkdsk na Microsoft Windows.
»Ọ bụrụ na nzọụkwụ n'elu enweghị ike inyere gị dozie nsogbu, ị ga-enweghị họrọ ma Ọkpụkpọ, na mgbe ahụ na-amalite na kaadị ebe nchekwa mgbake ozugbo o kwere omume.
Ọ bụrụ na ị bu n'obi iji naghachi faịlụ karịa ọdịyo faịlụ, photos, videos, dị ka Archives, PDF faịlụ, ozi ịntanetị, Office akwụkwọ .etc. si na ngwaọrụ ndị ọzọ na kọmputa, ị nwere ike họrọ a nnọọ elu version: Wondershare Data Recovery ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac, nke na-eme nnọọ ihe karịrị Photo Recovery.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Ụzọ idozi Data Loss kpatara Kaadị ebe nchekwa Error